Quick Tips Booqashada Iguazu Falls ka Argentina ama Brazil
February 6, 2017	tourismspot	Leave a comment	Dad badan ayaa laga yaabaa maqlay oo ku saabsan Iguazu ku Falls weyn oo cajiib ah. Dayrtan la oran karo waa mid ka mid ah ugu fiican in aad ka heli karto degaanka. Sida dheeri ah in, tartan ugu weyn ee dayrta, kanu waa mid ka mid oo kaliya Niagara Falls. Haddii aad ku fikirayso ku saabsan u safrida booqo dayrtan, markaas waa inaad
Talooyin Quick Simple in Shopping on Faneuil Hall Marketplace ee Boston
February 5, 2017	tourismspot	Leave a comment	Boston waxaa loo tixgeliyaa sida hal meel taariikhi ah oo aad booqan kartaa haddii aad ku sugan tahay Maraykanka of America. Saas waxaa ugu wacan badan oo taariikhdii la sameeyey ee Boston. inkastoo, goobtaan waxaa loo maalmahan noqday mid soo jiita dalxiiska fiican, gaar ahaan sababtoo ah Marketplace Faneuil Hall. Haa, Faneuil Hall waxaa loo tixgeliyaa sida hal xarun shopping fiican
Talooyin Super inay raaxaysta Your Holiday ee Rio Carnival
February 2, 2017	tourismspot	Leave a comment	Mid ka mid ah jiidashada ugu caansan ee Brazil, Rio Damaashaadka waxaa maanka ah buunafuufid lanooga in mideeya malaayiin dalxiisayaal reer Brazil kale oo ajnabi ah. meherijaan Tan waxaa lagu qaban magaalada yaabka leh ee Rio de Janeiro, waayo, 5 maalmood oo isku xigta waxa ay taasi xisbiga ugu kulul ee dalka. Waxa caadi ahaan lagu qabtay February of March, 40 maalmood ka hor ciidda Easter-ka
Top 4 Meelaha loogu talagalay Thanksgiving Maraykanka ee
February 1, 2017	tourismspot	Leave a comment	Fikirka ah isagoo fasax gaaban lagu jiro Thanksgiving ah? Well, waxaa jira dalal badan oo ugu wanaagsan ee Thanksgiving ee guud ahaan Maraykanka in aanad haysan si ay u safraan meel ka baxsan dalka. Tani waxay noqon doontaa fasax kale cabsi badan, waxaad ku Bixisaan qoyskaaga. Sidaas, daryeel si ay xisaabiso kuwaas oo ah meelaha ugu fiican ee? Aan iyaga ka ogaado. Gatlinburg, Tennessee Halkan
Talooyin ku raaxaysan cawayska habeenkii on Bourbon Street
January 27, 2017	tourismspot	Leave a comment	Wayso habeen on wadada caanka ah ee New Orleans noqon doonaa waayo-aragnimo cajiib ah. wadada Bourbon waa meesha ugu fiican ee xisbiga dhalashadaada, kulan, ama weekend ah joog saaxiibadaa. Meesha waa mid aad u fudud in ay gaaraan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku socotaan daqiiqad meel kasta oo Quarter Faransiiska, oo kaliya daqiiqad